जब भिखारीकै ७५ लाखको कार ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > मुख्य समाचार > जब भिखारीकै ७५ लाखको कार !
जब भिखारीकै ७५ लाखको कार !
इङ्ल्याण्डको कोर्नवाल काउन्टीका भिख माग्दै हिँड्ने एक भिखारीले महंगो कार चढ्ने गरेको सार्वजनिक भएपछि स्थानीयहरु रुष्ट देखिएका छन् । भिख मागेर गुजारा चलाउने माथियु ब्रिटोनले अडि टिटी कार किनेपछि स्थानियहरु उनीसँग रुष्ट देखिएका हुन् । ब्रिटोन यस क्षेत्रमा चिनिएका मगन्ते हुन् ।
उनले वषौदेखि यस क्षेत्रमा माग्दै आएका थिए । तर पछिल्लो समय ब्याङक स्ट्रिट नजिक ७० हजार अमेरिकी डलर पर्ने कारमा उनी बसेको भिडियो फेसबुकमा शेयर भएपछि उनलाई स्थानियहरुले ज्यान मार्ने धम्की समेत दिएका छन् ।
गत फेब्रुअरी १८ मा फेसबुकमा उनले कार चढेको भिडियो सार्वजनिक हुनासाथ नाकारात्मक कमेन्टहरुको ओइरो लागेको थियो । उनलाई पैसा दिने व्यक्तिहरुले आफू ठगिएको भन्दै उनको सत्तोसराप गरेका थिए । ‘ मलाई अचम्म लागिरहेको छ कि एक वृद्धले समेत उनलाई ४० पाउन्ड दिएका थिए ।
उनले हामीलाई गरिबीको नाममा ठगेका रहेछन्,’– फेसबुकमा एक व्यक्तीले लेखेका छन् । त्यस्तै अर्का व्यक्तिले लेखेका छन्–‘मेरो ८ वर्षको छोराले भनेपछि मैले उनलाई पानी र तातो खानेकुरा दिने गरेको थिएँ । मेरा दुई छोराले ठगिएको महसुस गरे । तर ,मैले प्राय घरबारविहिनहरु उनीजस्तो फटाहा हुदैँनन् भनेर छोराहरुलाई संझाएको छु ।’
प्रकाशित मितिः २०७४ असार ५
२०७४ असार ५ गते ११:३० मा प्रकाशित
छिमेक लघुवित्तको ४४.३३५४% लाभांश सुरक्षित गर्न आज अन्तिम मौका
अर्थमन्त्रीको एक सम्वोधनले सेयर बजारमा तरङ्ग, लगानीकर्ता उत्साहित
साउन १० देखि १९ गतेसम्मको मिति ख्याल गर्नुहोस् र न्यूनतम १०० रुपैंयामा लाखौं कित्ता सेयर किन्नुहोस् !
६ महिनामै ५० प्रतिशत नाफा कमाउँदै बैंकहरु